Agoonta Xanaano fadhisa fasalka | Home
Agoonta Xanaano fadhisa fasalka
May 20th, 2012 farah Hay’adda Xanaano oo daryeesha in ka badan lixdameeyo agoon ah ayaa hirgalisey mashruuc ay ku dabooleyso baahida waxbarasho ee ciyaalka ay hayso. Hay’adan ayaa ilaa iyo hada u suuro galisey dhamaantood ciyaalkaas inay helaan wax-barashada aasaasiga ah ee uu u baahan yahay qofka insaanka ah. Waxbarashadan ay ciyaalkani haleen ayaa isgu jirta barashada diinta islaamka iyo waliba aqoonta kale ee lama huraanka ah. Ciyaalkan ay hay’adu u suuro galisey in waxbarashada helaan ayay sidoo kale kafaalo qaadey nolashooda tan iyo inta ay ka hana qaadayaan.
Posted in Sawiro Hawlihii ZakatulFitiga ee sanadka 2010 »